Chalet Itamambuca/Praia Itamambuca - Ubatuba/SP - I-Airbnb
Chalet Itamambuca/Praia Itamambuca - Ubatuba/SP
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguRegina
KULULA KWAYE KUFUNEKA!
Indawo ekufutshane neendawo ezintle, phakathi kweHlathi leAtlantiki, kwelinye lawona manxweme amahle kakhulu e-Ubatuba, indawo edibanisa kakhulu nendalo.
I-CHALET AYIKHO LODWA, sikwikona ethe cwaka kakhulu, kodwa sinabamelwane, abanezindlu ezingekho kufutshane kangako.
KWAYE THINA, ababuki zindwendwe, sihlala kwipropati ehlala kwisiza esisecaleni kwendlwana. KHULULA UYAKUBA NOMFIHLO OGCWELELEYO!
UFUNA UKUZA ISILWANYANA SAKHO? Qhagamshelana nathi kuqala!!
KUSOLOKO KUHLE UKUFUNDA!!!!
KULULA KWAYE KUFUNEKA yile nto sinayo apha.
Indlu Itamambuca ise phakathi Atlantic Forest engqongwe uhlaza, kunye kwityotyombe entle, enkulu loqhakamshelwano nendalo Lo mhlaba imalunga-1 km ukusuka elunxwemeni, ukufikelela kuyo kungenziwa ngeendlela ezimbini:. At ngeenyawo, kuyimfuneko ukuwela uMlambo i-Itamambuca, kukho isikhephe sokukhwela kwisiza esenza ukuwela okanye kwi-low tide ukuwela kungenziwa ukuhamba !!! Ngemoto, ukufikelela kwenziwa yi-Condominium ngokusebenzisa iNdlela ePhambili, ekwavumela ukuba u tyelele ezinye iilwandle ezintle ezikufutshane kakhulu ne-Itamambuca ... Félix, Primirim, Praia Vermelha do Norte, Praia do Alto.
Indawo elula nenomtsalane!!!IVila Recanto de Itamambuca, indawo ezolileyo kakhulu, iivenkile ezincinci, ezinotyani obuninzi kwaye zingqongwe yiSerra do Mar entle, elungele ukuphumla ngokudibana ngqo nendalo.
Amaxabiso aboniswe kwiwebhusayithi yeyondwendwe LUNYE ngobusuku, nikela ingqalelo kwinombolo ngaphambi kokuba ubhukishe.
Ndiyafumaneka nanini na uyifuna!!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ubatuba